Nivarina avy amin’ny “Mahafa-po” nankany amin’ny ‘Manahirana’ ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety ao Hong Kong tao anatin’ny taona vitsivitsy · Global Voices teny Malagasy
Miantraika amin'ny laharana ny lalànan'ny fiarovam-pirenena sy ny fisamborana ny mpanao gazety
Voadika ny 17 Mey 2022 4:47 GMT
Reporters Sans Frontières mampiseho ny Sarintany Fahalalahan-Gazety 2022
Nihintsana lalina dia lalina indrindra i Hong Kong teo amin'ny Tondro Fahalalahan-gazety iraisampirenena tamin'ity taona ity. Laharana faha-80 ny tanàna tamin'ny herintaona ary nidina toerana 68 ka laharana faha-148 tamin'ireo firenena 180 tamin'ny taona 2022.
Nanara-maso ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety manerana an'izao tontolo izao ny mpanara-maso iraisampirenena, Reporters Sans Frontières (RSF) nandritra ny roapolo taona. Navoaka tamin'ny 3 Mey — Andro maneran-tany ho an'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety — ny tondro 2022 .
Tamin'ny taona 2002, laharana faha-18 i Hong Kong — nahatonga azy ho fanilon'ny asa fanaovan-gazety malalaka eto amin'izao tontolo izao, indrindra fa any Azia — saingy nihasimba be ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety. Tamin'ny taona 2021, taorian'ny fampiharana ny Lalànan'ny Filaminam-pirenena (NSL), nilatsaka ho faha-80 ny tanàna, ary nihintsana hatrany amin'ny faha-148 tamin'ity taona ity satria noteren'ny polisin'ny fiarovam-pirenena hihidy ny famoaham-baovao tsy miankina roa lehibe, Apple Daily sy Stand News.
Nihintsana i #HongKong tao anatin'ny tabilaon'ny fahalahan'ny asa fanaovan-gazety iraisam-pirenena satria nampiasa lalàna vaovao henjana momba ny fiarovana ny manampahefana mba hanampenam-bava ireo famoaham-baovao manakiana sy hanagadrana mpanao gazety, hoy ny tati-baovaon'ny @RSF_inter tamin'ny talata. Raha hijery feno: https://t.co/JZNmkgKhIk #pressfreedomday #WPFD pic.twitter.com/P8M8gZWRaK
Tao anatin'ny roapolo taona, nidina avy amin'ny faharoa tsara indrindra “Mahafa-po” ho “Manahirana” ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ao Hong Kong ary tamin'ny sokajy “Sarotra” faharoa ratsy indrindra tamin'ity taona ity, sambany ambany noho i Filipina (faha-147) sy Singapaoro (faha-139).
Nandray fomba fiasa vaovao ny RSF tamin'ny tondrony 2022, izay mamaritra ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ho
Fahafahana mahomby ho an'ny mpanao gazety, amin'ny maha-olona na vondrona, hisafidy, hamokatra ary hanaparitaka torohay sy vaovao ho tombontsoan'ny besinimaro, mahaleotena amin'ny fitsabahana ara-politika, ara-toekarena, ara-pitsarana ary ara-tsosialy, ary tsy misy fandrahonana ny fiarovana azy ireo ara-batana sy ara-tsaina.
Ny tontolo ara-politika, ny rafitra ara-pitsarana, ny tontolo ara-toekarena, ny tontolo ara-tsosialy sy ara-kolontsaina ary ny filaminana ireo tondro dimy vaovao.
Nidina ny laharan'i Hong Kong noho ny tondro ara-dalàna sy ny fiarovana, araka ny hita ao amin'ny tatitra ara-paritry ny RSF. Faritan'ny kiady iraisampirenena ny NSL ho:
Fialàna bala hanampenam-bavao ireo feo tsy miankina amin'ny anaran'ny ady amin'ny “fampihorohoroana”, “fisaraham-bazana”, “fanakorontanana”, ary “firaisan-tendro amin'ny hery vahiny”.
Ankoatra ny NSL, nampiasaina ho fitaovana ara-dalàna hanakatonana ny Stand News ny lalànan'ny fikomiana tamin'ny andron'ny fanjanahantany.
Raha ny momba ny tondro ara-piarovana, nanamarika ny RSF hoe:
Nandritra ny hetsi-panoherana tamin'ny taona 2019, mpanao gazety an-jatony no niharan'ny herisetran'ny polisy ary nogadraina sy voampanga ihany koa. Nanomboka tamin'ny taona 2021 ny onjan'ny fisamborana vaovao, ka mpanao gazety am-polony no voatazona noho ny heloka bevava momba ny fiarovam-pirenena.
Araka ny fandrefesana RSF, amin'ireo mpanao gazety sy mpiasan'ny haino aman-jery miisa 480 any am-ponja amin'izao fotoana izao, 18 no avy any Hong Kong. Mpanao gazety valo sy mpikambana mpanatanteraka ao amin'ny Apple Daily no nosamborina, ary fito no voampanga ho niray tsikombakomba tamin'ny tafika vahiny araka ny NSL. Anisan’izany ny mpanorina ny fampahalalam-baovao Jimmy Lai. Ho an'ny Stand News kosa, tonian-dahatsoratra zokiny roa teo aloha no voampanga ho niray tsikombakomba tamin'ny famoahana lahatsoratra mampiady.
Manamarika ny tatitry ny tondro RSF 2022 fa niharatsy tanteraka ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ao amin'ny Faritra Azia Pasifika, izay manana mihoatra ny antsasaky ny mponina manerantany, vokatry ny ady ara-tafika sy ny rafitra ara-politika tsirefesimandidy izay manome hery ny governemanta hifehy tanteraka ny vaovao.
Amin'ireo firenena 32 any Azia Pasifika, valo no ao anatin'ny sokajy “Toe-draharaha tena henjana”, ka i Korea Avaratra (faha-180) no laharana ratsy indrindra eran-tany, arahin'i Myanmar (faha-176) satria nitarika “famoretana henjana ny mpanao gazety” ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2021 . Shina (faha-175), Vietnam (faha-174), Bangladesh (faha-162), Laos (faha-161), ary Pakistan (faha-157) izay mbola mifehy mafy ny fikorianan'ny media sy ny vaovao. Afghanistan (faha-156) kosa nidina be ihany koa satria lasa lasibatry ny fampitahorana ny mpanao gazety sy ny fampahalalam-baovao taorian'ny nandrombahan'ny Taliban ny fahefana tamin'ny volana Aogositra 2021.
Asongadin'ny tatitry ny RSF 2022 ihany koa ny haikan'ny fisaraham-bazana manoloana ny fikorontanan'ny torohay ateraky ny vaovao faikany sy ny propagandy, izay miteraka fisaratsarahana ao anatin'ny fiaraha-monina demaokratika ary manimba ny demaokrasia maneran-tany :
Eo amin'ny sehatra iraisampirenena, mihamalemy ny demaokrasia noho ny tsy fitoviana misy eo amin'ny fiarahamonina misokatra sy ny fitondrana tsy refesi-mandidy izay mifehy ny haino aman-jery sy ny sehatra anjotra no sady mikarakara adim-propagandy ifanandrinana amin'ireo mitandro ny demaokrasia.